Iingcebiso ezi-9 eziSebenzayo zokuDibana noMama ongatshatanga - Ukuthandana Tips
Iingcebiso ezi-9 eziSebenzayo zokuDibana noMama ongatshatanga
Ulahlekile-ufile mhle, unengqondo, kwaye ukuwe ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, kukho ukubanjwa: ngumama ongatshatanga. Ukuba ufana nabafana abaninzi kwihlabathi lokuthandana, umbono wokuhamba nomntu obhinqileyo osele enabantwana uyoyikisa, mhlawumbi woyike nokuba.
Iingcebiso ezilithoba zokuthandana noMama oNye
Iinkcukacha-manani bonisa ukuba baphantse baba zizigidi ezilishumi oomama abangatshatanga kweli lizwe ukusukela ngo-2014. Ngenxa yoko, amathuba okuba ufumane unomdla wokuthandana nomama onabantwana ulungile. Ukuthandana nomntu ongumama nako kungohluka kancinci, kodwa ngezikhombisi ezimbalwa, akufuneki kube kubi njengoko unokucinga.
Iingxaki ezili-11 eziqhelekileyo zoMama omnye
Izinketho zeQela lenkxaso yabazali
I-33 iikowuti ezinamandla ngokuthandana noMama ongatshatanga
1. Ziqhelanise ne-Ex yakhe ekufutshane nayo
Ukuba uthandana nomama ongatshatanga, kuya kufuneka uqhele into yokuba usenokuba nolwalamano lomzali notata womntwana. Njengomhle omtsha, kuya kufuneka ujongane ne-ex yakhe isesemfanekisweni. Unokufowunela okanye athumele umyalezo xa ekunye nawe, okanye angabikho ekhayeni lakhe amaxesha ngamaxesha ukuya kulanda abantwana okanye axoxe ngoxanduva lwabazali. Oku kuhamba kunye nommandla.
2. Cinga ngexesha lakhe
Ukuba uthandana nomntu ongenabantwana, ukubonisa imizuzu eli-15 emva komhla okanye ukumbangela ukuba afike emva kwexesha ukubuyela ekhaya ngekhe kungabi yinto enkulu. Nangona kunjalo, ukuba uthandana nomama ongenaqabane, xa ekuxelela ukuba kufuneka abe sele efikile ngentsimbi yeshumi, akaqhuli. Kumama ongatshatanga, ukuba neeyure ezimbalwa zokumgcina kuthetha ukuba ufumene umhleli kwaye usebenze nzima imini yonke elungiselela ukuqinisekisa ukuba ulala ebusuku. Akunakulindeleka ukuba ubenako ukumtsalela umnxeba ngentsasa yangoMgqibelo uze umenze aphume nawe ngorhatya olo. Lithathele ingqalelo ixesha lakhe ngokwenza amalungiselelo emihla kwangaphambili kwaye wenze nenxalenye yakho ukuhlala kwishedyuli yakhe.
3. Funda ukuba bhetyebhetye
Libala yonke into oyaziyo malunga nendlela umhla oqhele ukuhamba ngayo. Ukuthandana nomama ongatshatanga kunzima kwaye akunakuthetha ukubambelela kwishedyuli engqongqo, oko kunokuthetha ukuba kufuneka ubhetyebhetye ngokupheleleyo. Musa ukumangaliswa (okanye ukucaphukisa) ukuba kufuneka ashiye umhla kwangoko, rhoxisa ngomzuzu wokugqibela, okanye ukuba kufuneka akunqumle phakathi kwincoko yomnxeba yothando. Akukho shedyuli yezinto ezingalindelekanga eziza nokuba ngumzali. Iimeko ezinjengokuba nomntwana ogulayo ngequbuliso okanye ukufumana umnxeba okhathalelo lwemini kuba omncinci ufuna utshintsho lwempahla kuya kuqala.
4. Sukumangaliswa Ukuba Akaseli
Xa unomntwana omncinci ekhaya exhomekeke kuwe ukuba wenze yonke into, utywala ayinakuba yinto onokuyicinga. Unokuba neglasi yewayini kunye nawe kwisidlo sangokuhlwa, kodwa ngekhe iqhubeke ngakumbi kunoko. Akanakho ukuthatha ithuba lokufika ekhaya enxilile kwaye engakwazi ukonga umntwana wakhe okanye nokuvuka kusasa aye kwi-hangover ebalekayo.
5. Lindela iingxoxo ezixhalabisayo kwangethuba
Unokufuna ukushiya naluphi na uhlobo lwentetho ngomtshato, abantwana okanye izicwangciso zexesha elizayo ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, uya kuzisa iingxoxo ezinzulu ngokukhawuleza kunomfazi ongenamntwana. Umama ongatshatanga akanalo ixesha elininzi lokuchitha nomntu ongenazo iinjongo zobudlelwane ezifanayo nezakhe. Lindela ukuba esi sihloko siza kuvela ngaphambili kunesiqhelo.
Ngaba i-jet ikhukhumele i-marshmallows i-gluten mahala
6. Khetha uMhla ekuFikelelwa kuwo kufutshane neKhaya
Nokuba uyazi indawo yokutyela entle ngeyure enye okanye unemibono yokuya kwizixeko ezimbalwa ukuya kubamba umboniso, ukuthandana nomama kuya kuthetha ukuba ufuna ukunamathela kufutshane nekhaya. Ayizukuphela komhla obekwe kude ukude ungathatha ixesha elide, unokungonwabi ngombono wokuba kude kakhulu nabantwana bakhe. Ngaphambi kokuba ucwangcise ukuphuma okubandakanya ukuhamba, kuya kufuneka usicime kunye naye kwangaphambili kwaye ungathathi buqu ukuba akakwazi kuhamba.
7. Musa ukulindela ukuDibana naBantwana baKhe kungekudala
Oomama bahlala benoloyiko malunga nokuzisa umfana omtsha ejikeleze abantwana babo ngaphambi kokuba bazi ukuba umfana uthe nca. Usenokuba ulungile ngokuthandana nawe amaxesha ambalwa kwaye angaphinde akubone kwakhona, kodwa abantwana banokwenza isincamathiselo ngokukhawuleza okukhulu. Emva kwemihla eliqela, kulungile ukuzisa umbono, kodwa ekugqibeleni isigqibo sesakhe. Myeke athathe isigqibo xa sele ekulungele ukukuzisa kubomi babantwana bakhe.
8. Musa ukuzitofa njengomntu onguTata
Musa ukucinga ukuba unaso nasiphi na isibophelelo sokuthatha indima yokuba ngutata kwangoko kubudlelwane, nokuba kungokomfuziselo kwincoko. Umama ongatshatanga wokuthandana uthetha ukuba kufuneka uyeke ukuthetha ngendlela oza kuzisingatha ngayo iimeko zobuzali kwaye uphephe ukunika iingcebiso 'njengotata'. Umhla wakho unokukuthatha njengokunyanzelwa ukuba uzama ukwenza njengomntu ongutata ebantwaneni bakhe kwangoko. Ngokunjalo, kuphephe ukuthengela abantwana bakhe izipho kwasekuqaleni. Unokucinga ukuba sisenzo esicingisisayo okanye isenzo, kodwa ukudotywa kwembewu yakhe kunokwenzeka ukuba kungathandeki kwinqanaba lokuqala.
indlela yokujongana nosapho olungasebenzi kakuhle
9. Qonda iiSleepovers ziya kuRare
Ungalibala kakhulu umbono wokuba uya kuba nomhla owoyikekayo kwaye emva koko uvuke ezingalweni zomnye nomnye kusasa. Izinto zokulala ezimangalisayo ziya kuba yinto enqabileyo kumama ongatshatanga. Ke ngoko, sukucaphuka xa ekucela ukuba uhambe emva kokuhlwa okumangalisayo kwindawo yakhe kwaye uqonde xa kufuneka egodukile emva kokuchitha ixesha nawe.
Zahlukile, kodwa azimbi
Ukuthandana nomama ongatshatanga kunokuba kwahlukile, kodwa akusoloko kungumahluko ombi. Emva kwayo yonke loo nto, uya kuba uthandana nomntu owomeleleyo, onoxanduva, kwaye ujonge ubudlelwane obunentsingiselo. Yiba nomonde, unyanisekile, kwaye usiqonde isikhundla sakhe kwaye unokufumanisa nje ukuba ukuba nabantwana kwakhe sele kuyibhonasi kunokuba ngumthwalo.
Ubugcisa Imiboniso Yesilayidi Ukucoca Iitips Umntu Ne Superhero Costumes Umama Wear Umsele
ngaba iikati ezingamadoda zihamba zishushu
ukulahleka komthandazo wosapho
Ngaba amagumbi okuncokola asekhona ngo-2017
ubugqiba njani ubudlelwane obuqhelekileyo
igama into oyenzayo kwiinzipho zakho
Umjikelo wobomi bembotyi yelima
Zingaphi iipavumente endizidingayo